Tiorka: Tsy Mahazo Mibitsika Avy Any Amin’ny Lapam-pitsaràna! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2011 9:37 GMT
“Entitra kokoa ny mpitsara androany” hoy ilay bitsika, “Mpitandro filaminana manao akanjon'olon-tsotra isaky ny filaharana! Samy manara-maso ireo izay mitoraka bitsika!“
Any Istanbul-Tiorkia, androany no andro faharoa hiatrehana ny fitsarana ho an'ireo mpanao gazety 10 voasambotra. Firenena mitarika ny lohany i Tiorkia, eny fa mbola alohan'i Shina sy Iran aza amin'ny fanànana mpanao gazety 107 voasambotra.
Mba ahazoanao vaovao tsy tapaka, araho ny @oemoral, @petite1ze, @etemelkuran amin'ny fitorahana bitsika mivantana avy ao amin'ny lapam-pitsaràna.